विराटनगरमा कोइरालालाई गठबन्धन र आफ्नैबाट धोकाको डर, थापाले फर्काउलान् एमालेको विरासत ? (२०७४ को परिणामसहित)
2022-05-02 11:05 Desk
विराटनगर, १९ वैशाख । आगामी ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश १ को राजधानीसमेत रहेको एक मात्र महानगर विराटनगरको चुनावी माहोल तातेको छ । यतिबेला विराटनगरमा सवै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी अभियानसहित जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन् । उनीहरु आ–आफ्नो चुनावी एजेण्डा र प्रतिवद्धतासहित जनताको घरदैलोमा मत माग्दै पुगिरहेका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार विराटनगरको मेयरमा १३ र उपमेयर पदमा १४ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । विराटनगरको मेयर पदका लागि स्वतन्त्रसहित १३ र उपमेयरमा १४ जना चुनावी मैदानमा रहेपनि मुख्य प्रतिष्पर्धा नेकपा (एमाले) र सत्ता गठबन्धनबिचनै हुने देखिएको छ ।
एमालेका तर्फबाट मेयर पदका लागि महानगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापा चुनावी मैदानमा छन् । एमालेले उपमेयरमा शिल्पा कार्कीलाई अघि सारेको छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस मोरङका उपसभापति नागेश कोइरालालाई मेयरकारुपमा अघि सारेको छ ।
पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनले गरेको भागवण्डा बमोजिम विराटनगरको मेयर कांग्रेसको भागमा परेको थियो । त्यस्तै जसपालाई विराटनगरको उपमेयर दिने केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले गरेको सहमति अनुसार उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रलाई सो पार्टीले अघि सारेको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा पाँच दल भएपनि विराटनगरमा कांग्रेस र जसपाको तालमेल भएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबिच भएको सहमति बमोजिम माओवादी केन्द्रले आधिकारीक रुपमा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवार उठाएको छैन ।
तर, सोही पार्टीकी विराटनगर महानगर कमिटी सचिव नमिता न्यौपानेले उपमेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन् । माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको खण्डमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सहमति भाँडीने र चितवनको भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले चुनाव हार्ने डरले न्यौपानेलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिएको हो ।
न्यौपानेलाई माओवादी नेता कार्यकर्ताको साथ छ । न्यौपानेको चुनावी प्रचारप्रसार र घरदैलोमा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले सघाइरहेका छन् । गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकी न्यौपानेलाई माओवादी केन्द्रले कारबाहीसमेत गरेको छैन । उम्मेदवारलाई टिकट वितरणको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेस र जसपाभित्र चर्को असन्तुष्टी छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जितेका निवर्तमान मेयर भीम पराजुलीले पनि पुनः उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए । पार्टी सभापति देउवा खेमामा खुलेका उनको टिकट लगभग ‘पक्कापक्की’ जस्तै भइसकेको थियो ।
तर, कोइराला परिवारको पकड रहेको विराटनगरमा नागेश कोइरालालाई उम्मेदवार बनाउने अडानबाट डा. शेखर कोइराला पछि नहटेपछि देउवा गलेका थिए । सोही कारण कोइरालाले अन्तिम समयमा टिकट पाउन सफल भएको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । कोइरालालाई टिकट दिएपछि निवर्तमान मेयर पराजुलीले आफुमाथि अन्याय भएको सार्बजनिकरुपमै बताइसकेका छन् ।
लामो समय कोइराला खेमामा रहेका पराजुली मेयरको टिकटकै लागि कित्ता परिवर्तन गर्दै संस्थापन (देउवा) पक्षमा लागेका थिए । उनी देउवा प्यानलबाटै नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
कोइरालाले टिकट पाएकोमा संस्थापन पक्षका नेताहरुमा असन्तुष्टी देखिएको छ । जसका कारण कोइरालामाथि अन्तरघातको खतरा रहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एक्लै लडेर मेयर, उपमेयरसहित अधिकांस वडा जितेको कांग्रेसले अन्य दलहरु विभाजित र टुटफुटका कारण कमजोर अवस्थामा रहेपनि पार्टीले गठबन्धन गरेर सिट बाँडेकोमा पनि नेता कार्यकर्तामा असन्तुष्टी उत्तिकै छ ।
उपमेयर जसपालाई छाडेपछि कांग्रेसमा आवद्ध महिलाहरुसमेत रुष्ट छन् । जसका कारण कोइरालालाई कांग्रेसकै सवै प्रतिवद्ध मत नआउन सक्ने आशंका रहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
उता उपमेयर पाएको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि टिकट वितरणकै विषयलाई लिएर भाँडभैलो छ । जसपाबाट विराटनगरमा मेयरको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका प्रभावशाली नेता उमेश यादवले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि पार्टी त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसँग गठबन्धन गरेको जसपाले पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपपेन्द्र यादवका छोरालाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएपछि विराटनगरकी प्रभावशाली नेतृ बसुन्धरादेवी झाले पनि पार्टी त्यागेर उपमेयरमै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
उनीहरुले कांग्रेस र जसपाको धेरै मत काट्ने विराटनगरमा विश्लेषण भइरहेको छ । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल माओवादी केन्द्र र एमालेबाट चोइटीएर बनेको नेकपा (एस) कांग्रेसले आफुहरुको अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।
उता एमालेले भने आफ्नो पार्टी एक ढिक्का रहेको दावी गरेको छ । विगतको निर्वाचनमा पार्टीभित्रै रहेर माधव नेपाल समुहले अन्तरघात गर्दै आएका कारण पराजित हुनुपरेपनि यसपटक भने एमाले एक ढिक्का रहेको महानगर कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर पदका उम्मेदवार थापा बताउँछन् ।
उनले पहिले भन्दा अहिले एमाले अझ शक्तिशालि भएकाले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने दावी गरे । कांग्रेस, जसपामा पार्टीभित्रको असन्तुष्टी र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबिचको खट्पटीका कारण यसपटकको निर्वाचन विराटनगरमा रोचक हुने देखिएको छ ।
को हुन् थापा र कोइराला ?
एमालेका उम्मेदवार सागर थापा विराटनगरमा निकै लोकप्रीय नेता हुन् । उनी जनतामाझ घुलमिल भइरहने नेता हुन् । करिब १२ वर्ष विराटनगरमा पार्टीको नेतृत्व गरेका थापा नियमित टोलवस्तीहरुमा पुग्दै आएका छन् ।
थापा जनताको हरेक सुख दुखमा सामेल हुने नेताका रुपमा विराटनगरमा परिचित रहेको उनी समर्थकहरु बताउँछन् । यसपटकको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार बन्न केन्द्रीय नेतहरुलेसमेत आकांक्षा देखाएपनि सागर थापा आम कार्यकर्ताका माग थियो ।
विराटनगरमा लोकप्रीयता र कार्यकर्ताको माग बमोजित थापाले टिकटमा बाजी मारेका हुन् । इमान्दार नेताको छवि बनाएका थापा विवादका कहिल्यै नमुछिएको एमालेजन बताउँछन् ।
बुवा चन्द्रबहादुर र आमा कमला थापाको कोखबाट ३ साउन २०३३ मा जन्भिएका उनी विराटनगरवासी माझ घुलमिल हुँदै आएका नेता हुन् । विराटनगर–४ जामुनगाछी घर भएका थापा स्कुले जीवनदेखि नै विद्यार्थीको हक हितको आवाज उठाउँदै अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएका थिए । विद्यार्थी आन्दोलनबाटै उनी पार्टीको राजनीतिमा आएका हुन् । थापा २०४६ सालदेखि औपचारिकरुपमा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका थिए ।
स्नातकोत्तरसम्मको अध्यक्ष पुरा गरेका थापा देशकै चर्चित विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखि क्याम्पसको दुई पटक स्ववियू सभापति भए । थापा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको २०५७ देखि ०६० र २०६० देखि २०६२ सम्म स्ववियू सभापति भएका थिए ।
विद्यार्थी राजनीति हुँदै एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थापा विद्यार्थी कालदेखि नै जुझारु कार्यकर्ताको पहिचान बनाएका थिए । नेकपा एमाले महानगर कमिटी इन्चार्ज हुँदै संयोजक र अध्यक्ष भई लगातार १२ वर्षदेखि विराटनगर महानगरको नेतृत्व थापाले गरेका छन् ।
शाही शासन कालमा आन्दोलन गरिरहँदा पक्राउ परि २८ दिन जेल जीवन पनि उनले बिताएका थिए । २०७४ सालमै मेयरको उम्मेदवार टुंगो लागेपनि अन्तिम समयमा हेभिवेट नेतालाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीले निर्णय गरेपछि उनी पछि हटेका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेता विनोद ढकालले टिकट पाएका थिए । तर, उनी तत्कालिन कांग्रेसका नगरसभापति भीम पराजुलीसँग मेयरमा पराजित भएका थिए । पराजुली पनि नेवि संघको बागी उम्मेदवार बनेर महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियु सभापति जितेका थिए । थापा पछिका स्ववियु सभापति पराजुली हुन् ।
कांग्रेस–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवार नागेश कोइराला हाल कांग्रेस मोरङका उपसभापति हुन् । उनी कोइराला परिवारकै लिगेसीका कारण राजनीतिमा अघि बढेको कांग्रेसजन बताउँछन् । कोइरालाको पारिवारिक पृष्ठभूमीनै राजनीतिसँग जोडिएको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र नागेशबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । उनी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दल मोरङको कोषाध्यक्ष भएपछि सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुन् । तरुण दलपछि उनी कांग्रेसको जिल्ला सचिव हुँदै हाल पार्टीको जिल्ला उपसभापति छन् । कोइराला कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
कसले मार्ला बाजी ?
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र तत्कालिन विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रीक) ले चुनावी तालमेल गरेका थिए । हाल गच्छदारको पार्टी कांग्रेसमा समाहित भइसकेको छ ।
त्यस्तै उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र तत्कालिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले गठबन्धन गरेका थिए । सो निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लडेको थियो ।
२०७४ को निर्वाचनमा विराटनगरमा एक्लै लडेको कांग्रेसले मेयर र उपमेयरसहित अधिकांश वडा जितेको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका भीम पराजुली २३०३१ मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा (एमाले) का विनोद ढकालले १७३२१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
सो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमले चुनावी तालमेल गरेका थिए । मेयरमा माओवादी–संघीय समाजवादी फोरमका साझा उम्मेदवार संघीय समाजवादी फोरमका उमेश यादव १४९५८ मतसहित तेस्रो भएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रल्हाद साहले ५५२४ मत ल्याएर चौथो भएका थिए ।
उपमेयरमा पनि नेपाली कांग्रेसकै इन्दीरा कार्की २०१४६ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी थिइन् । उनकी निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरमकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी नमिता न्यौपानेले ११५२४ मात्र मत प्राप्त गरेकी थिइन् । एमालेसँग तालमेल गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रीक) की सूची चौधरीले १०५३६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी शोभा श्रेष्ठले ४१०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
१९ वडा रहेको विराटनगरमा नेपाली कांग्रेसले वडा नम्बर १, ३, ४, ७, ८, ९ र १६ वडा जितेको थियो । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले वडा नम्बर १२, १३, १४, १५, १७ र १८ नम्बर बाजी मारेको थियो ।
उक्त निर्वाचनमा संघीय समाजवादी पार्टीबाट १५ नम्बर वडाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका असलम आलम हाल नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर कांग्रेसबाटै सोही पदमा उम्मेदवार बनेका छन् ।
एमालेले २, ५ र ११ नम्बर वडा जित्दा माओवादी केन्द्रले एउटा ६ नम्बर वडा मात्र जितेर अस्तित्व बचाएको थियो । वडा नम्बर १० र १९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा विराटनगर महानगरको मतदाता संख्या एक लाख १३ हजार ७६१ थियो । यसपटकको निर्वाचनमा विराटनगरमा १९ हजार ३८१ मतदाता थपिएर एक लाख ३३ हजार १४२ पुगेको छ ।
गच्छदारको पार्टी समाहित भएको, अन्य पार्टी विभाजित र टुटफुटका कारण पनि कांग्रेस विराटनगरमा थप बलियो बनेको देखिन्छ । तर, कांग्रेसको संस्थापन र कोइराला पक्षबिचको टकराव टिकट वितरणदेखिनै छरपस्ट भइसकेको छ । कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेको जसपा भित्रपनि वडातहसम्मै असन्तुष्टि छ । गठबन्धनका पाँच दलभित्रै विश्वासको वातावरण छैन ।
एमालेले माओवादी केन्द्रसहित अन्य पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ता भित्र्याएर विभाजनबाट भएको क्षती भन्दा बढी पूर्ती गरिसकेको जनाएको छ । तर, एमाले विभाजनको असर अहिलेनै आँकलन गरिहाल्ने अवस्था छैन ।
२०७४ को निर्वाचन परिणाम अनुसार हेर्दा एमाले भन्दा गठबन्धन तुलनात्मकरुपमा बलियो देखिएपनि आगामी निर्वाचनमा थपिएका मतदाता जता ढल्किन्छन् उसैले बाजी मार्ने निश्चीत छ । त्यसैले ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनमा थापा वा कोइरालामध्ये कसले बाजी मार्ला, त्यसका लागि भने मतदानपश्चात गरिने गणनाको नतिजानै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो छ विराटनगरको निर्वाचन इतिहास्
विराटनगरमा हालसम्म २ पटक कम्युनिस्ट र २ पटक कांग्रेसले मेयर जितेका छन् । २०४३ सालमा वामपन्थी उम्मेदवार ध्रुवनारायण श्रेष्ठ मेयर बनेका थिए । २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार अशोक कोइरालाले बाजी मारेका थिए । २०५४ सालको निर्वाचनमा एमालेका रमेशचन्द्र पौडेल मेयरमा निर्वाचित भए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा २०६२ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रल्हाद साह मेयर निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसका भीम पराजुलीले बाजि मारे ।
« चुनावको मुखमा ५ एआईजी र ११ डीआईजी एकै पटक खाली
विराटनगरको युवाको सुनसरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मृत्यु »
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा नेकपा एमालेको गठबन्धनविरुद्ध सहज जित
मोहन्यालका अध्यक्षलाई सपथ नगराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
मुख्यमन्त्रीकी श्रीमती गाउँपालिका उपाध्यक्षमै पराजित
विराटनगरमा नागेशको ६ हजार बढीको अग्रता
रतुवामाई नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस , उपमेयर एमाले निर्वाचित
भरतपुरमा रेनुलाई ३ हजार २६७ मतको अग्रता
बेलबारी नगरपालिका मेयरमा एमालेका दिलप्रसाद निर्वाचित , उपमेयरमा कांग्रेसकी नितु
आजदेखि अनलाइनबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति
अछामका तीन पालिकामा चुनावी तालमेल नगर्ने कांग्रेसकाे निर्णय
बर्षको पहिलो कारोबारमा देखिएन उत्साह ,२९.६० अंकले घट्यो नेप्से
निलम्बन कारबाहीविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा